Biography na ịkpa arụ nke Aristarco de Samos | Network Meteorology
Aristarchus nke Samos
Otu n'ime ndị mgbakọ na mwepụ na ndị na-enyocha mbara igwe nke ahapụrụ akara nchoputa ha bụ Aristarchus nke Samos. Ọ bụ ihe gbasara onye sayensị nke mepụtara nkwupụta mgbanwe maka oge ya. Ma ọ bụ na, n’oge ochie, ọ dị egwu ịgabiga ihe akwadoro. Kaosiladị, nwoke a kwuru na Anyanwụ na ọbụghị ụwa, bụ etiti Eluigwe na Ala. O kwukwara na ụwa na mbara ala ndị ọzọ gbara gburugburu Anyanwụ. N'ezie, nke a kpatara ọgba aghara na ndị kwenyere na ụwa bụ etiti nke ụwa site na tutuu ala.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara ịkpa ike na mmetụta ndị Aristarchus nke Samos nwere n’akụkọ ihe mere eme nke mgbakọ na mwepụ na mbara igwe.
1 Onwe onye
2 Main onyinye nke Aristarco de Samos
Aristarco de Samos bụ onye edemede nke ọrụ sayensị "Nke ịdị ukwuu na anya nke Sun na ọnwa." N'akwụkwọ a ọ kọwara ma gosipụta otu nchikọta ziri ezi nke enwere n'oge ahụ ohere dị n'agbata mbara ụwa anyị na Anyanwụ. N'ime otu okwu ya, o kwuru na kpakpando buru ibu karịa ka ha dị. Nke ahụ, ọ bụ ezie na a pụrụ ịhụ ha dị ka isi na mbara igwe, ha buru ibu anyanwụ karịa nke anyị. Ogo nke eluigwe na ụwa buru ibu karịa nke ndị sayensị na-ekwu n'oge ahụ.
A mụrụ ya na 310 BC ka ị chee n'echiche bụ isi ihe ọmụma dị adị n'oge ahụ. N'agbanyeghị nke a, Aristarchus nke Samos nwere ike ịkọwapụta echiche ndị doro nnọọ anya maka oge ya. Ọ nwụrụ n'afọ 230 a. C na Alexandria, Gris. Ọ bụ nwoke izizi nwere ike ịmụ ụzọ dị anya site na mbara ụwa anyị rue Anyanwụ n'ụzọ ziri ezi. Ọ mụtakwara ma kwuo ihe dị n’etiti ụwa na ọnwa. O kere echiche nke heliocentric, na-ekwupụta na Anyanwụ bụ etiti nke Eluigwe na Ala ma ọ bụghị ụwa.
N'ihi onyinye nke ọkà mmụta sayensị a, na narị afọ nke iri na asaa, Nicolaus Copernicus nwere ike ịkọwapụta n'ụzọ zuru ezu karị heliocentric tiori. N'ịbụ nwoke biri ndụ ogologo oge gara aga, enweghị ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ndụ ya. A maara na amụrụ ya na Gris na ọ bụkwa onye mmụta mbara igwe na mgbakọ na mwepụ. Ndụ ya dum nọrọ na Alexandria. O nwere mmetụta sitere na Egypt nke mere ka mgbakọ na mwepụ nke ndị Gris tolite ọtụtụ narị afọ tupu mgbe ahụ. O nwekwara agbamume sitere na Babilọn maka ịgụ kpakpando tupu ya amalite.
N'aka nke ọzọ, mmeghe nke East na Alexander the Great, nyere aka inwe mgbanwe nke echiche ndị nyere aka n'ụzọ dị mkpa maka echiche nke oge ahụ. Nka bu ihe Aristarchus nke Samos no na akuko ihe omimi nke uzo.
Main onyinye nke Aristarco de Samos
Otu onyinye dị oke mkpa bụ na o jisiri ike chọpụta na mbara ala ndị ahụ na-agba anyanwụ gburugburu, tinyere ụwa. O ji arụmụka rute nchọpụta a. Ọzọkwa, Ọ nwere ike ime atụmatụ etu ọnwa na sizewa hà ma hụ ka ha si dị anya.
O nwere ike ịchọpụta na ọ bụ ezie na kpakpando pere mpe nke na-eto site na mbara igwe, ha dị ka anwụ nke nwere oke buru ibu, mana ọ dị ezigbo anya. Nkọwa ndị a nile bụ ihe nketa nke Heliocentric Theory nke Nicolás Copernicus ji mee ihe.
N’oge ochie enwere ọtụtụ echiche maka ụwa nile. Cheedị ma ọ bụrụ na e nwere akụkọ mgbe ochie, akụkọ, na nkwenkwe ụgha. Ọtụtụ n'ime echiche ndị a nwere ọtụtụ echiche efu, akụkọ, wdg. Ozizi heliocentric bịara gbanwee ihe niile anyị nwere n'oge ahụ. Ọ dabeere na ụkpụrụ ndị a:
Ihe niile dị n’eluigwe anaghị agbanwe otu ebe.
Etiti ụwa bụ etiti nke ọnwa. Nke a pụtara na ọnwa na-agba ụwa gburugburu.
Akụkụ niile dị na mbara igwe (nke a maara dị ka mbara ala) na-agba gburugburu Sun na Sun bụ kpakpando guzobere na etiti ụwa.
Oghere dị n’etiti Earthwa na Anyanwụ bụ nanị ntakịrị ihe pere mpe ma e jiri ya tụnyere ohere dị n’etiti kpakpando ndị ọzọ.
Iswa abụghị ihe ọ bụla karịa okirikiri nke na-agba gburugburu Sun ma nwee karịa otu mmegharị.
A na-edozi kpakpando na enweghị ike imegharị. Ntugharị nke ụwa bụ ihe na-eme ka ọ pụta ìhè na ha na-agagharị.
Ngagharị nke Earthwa na-agba gburugburu Sun na-eme ka mbara ala ndị ọzọ dị ka ọ na-agbada.
Site na ntọala niile nke usoro heliocentric, enwere ike ịnakọta ụfọdụ data iji nweta ọrụ mepere emepe na nke zuru ezu n'afọ 1532. N'afọ a ka akpọrọ ya "Na mgbanwe nke mbara igwe." N'ime ọrụ a, a chịkọtara arụmarụ ụka asaa dị na tiori na n'ụzọ zuru ezu karị na nchịkọta iji gosipụta esemokwu ọ bụla.
Aristarco de Samos nwere ọrụ ndị ọzọ a maara dị ka "Na nha na anya nke anyanwụ na ọnwa" na ọzọ "Ntughari nke mbara igwe." Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye nwere ahịrịokwu nke na-agbada n’akụkọ ihe mere eme, o nwere nke a maara nke ọma n’akwụkwọ mgbe ochie ma kwuo ihe ndị a: "Beingbụ ịbụ, ịbụ abụghị."
Ihe dị mkpa nke nwoke a bụ na ọ bụ ya bu ụzọ chepụta heliocentric theory, ihe dị oke elu maka oge ya. Ọ ghọtara na ụwa mere mgbanwe zuru oke na Sun na ọ dịrị otu afọ. Na mgbakwunye, ọ gbalịrị ịchọta ụwa anyị n'etiti Venus na Mars. O kwuru na kpakpando ndị ahụ nọ nso n’ebe Sun na-enweghị ngwụcha ma dozie ha.
Site na nchọpụta ndị a niile enwere ike iketa echiche bụ na ụwa abụghị etiti nke ụwa, mana na ọ bụ Anyanwụ. Ọzọkwa, o nyekwara aka ịmara na ọ bụghị naanị na atedwa na-agba gburugburu Sun ma na ya onwe ya na axis.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Aristarco de Samos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Aristarchus nke Samos
Polar ice okpu